Uhlobo luni lwesinkwa abanesifo sikashukela abanalo? > Ukudla ngesifo sikashukela
Yisiphi isinkwa esivunyelwe futhi esingadliwa sikashukela
Isinkwa ngokwesiko simele isisekelo sokudla kwabo bonke abantu. Igcwala izakhi zomzimba, inika umuntu amavithamini kanye namaminerali.
Izinhlobonhlobo zanamuhla zikuvumela ukuthi ukhethe umkhiqizo omnandi kuwo wonke umuntu, kufaka phakathi isinkwa sabanesifo sikashukela.
Ngabe imikhiqizo yesinkwa yabashukela?
Ekhuluma ngesifo sikashukela, abaningi bakhumbula maswidi ngokushesha, bezidlulisela ekudleni okwenqatshelwe. Ngempela, kuma-diabetes, i-insulin ayakhiqizwa noma ayifezi umsebenzi wayo.
Ngakho-ke, ukudonsa okubukhali kweshukela kuqukethe amaswidi egazini kuholela ekwandeni kwamazinga kashukela nemiphumela ehambisanayo.
Kodwa-ke, isinkwa sisho imikhiqizo enenkomba ephezulu ye-glycemic, okungukuthi, uma isidliwe, kukhishwa inani elikhulu lama-carbohydrate angagayeki, umzimba ongakwazi ukubhekana nalo. Akungenzi ize futhi bahlola izinga lama-carbohydrate kumayunithi esinkwa.
Ngokuvumelana nalokho, ukusetshenziswa kwesinkwa ngabantu abanesifo sikashukela kudinga ukukhawulelwa kakhulu.
Okokuqala, lokhu kusebenza ezinhlotsheni ezimhlophe ngofulawa weprimiyamu, kufaka phakathi i-pasta neminye imikhiqizo ebhaka. Kuzo, okuqukethwe kwama-carbohydrate alula kakhulu.
Ngasikhathi sinye, isinkwa esivela kufulawa we-peeled noma i-rye, kanye nesinkwa, singasetshenziswa ekudleni futhi kufanele sifakwe ekudleni. Ngemuva kwakho konke, imikhiqizo yezinhlamvu iqukethe inani elikhulu lamaminerali kanye namavithamini, ikakhulukazi iqembu B, elidingekayo emzimbeni. Ngaphandle kokuthola kwabo, ukusebenza kohlelo lwezinzwa kuyaphazamiseka, isimo sesikhumba nezinwele siyanda, futhi inqubo ye-hematopoiesis iyaphazamiseka.
Izinzuzo zesinkwa, isilinganiso sansuku zonke
Ukufakwa kwazo zonke izinhlobo zesinkwa kwimenyu ngenxa yezimpawu zayo eziwusizo, kuqukethe:
umthamo omkhulu wefayibha
ukulandelela izinto: potassium, selenium, sodium, magnesium, phosphorus, iron ne,
amavithamini C, i-folic acid, amaqembu B nabanye.
Izinto zedatha eziqukethe okusanhlamvu ziqukethe inani eliphezulu, ngakho-ke imikhiqizo evela kuyo kumele ibe kwimenyu. Ngokungafani okusanhlamvu, isinkwa sidliwa nsuku zonke, esikuvumela ukuthi uguqule ubungako bawo.
Ukusungula okujwayelekile, umqondo weyunithi lesinkwa usetshenziswa, kufaka amagremu ayi-12-15 wama-carbohydrate futhi kuphakamisa izinga likashukela wegazi ngo-2.8 mmol / l, odinga amayunithi amabili e-insulin emzimbeni. Imvamisa, umuntu kufanele athole amayunithi esinkwa angama-18-25 ngosuku, adinga ukuhlukaniswa ngama-servings ambalwa adliwayo phakathi nosuku.
Hlobo luni lwesinkwa engingasidla nesifo sikashukela?
Inketho ekahle yabantu abanesifo sikashukela yisinkwa sikashukela, senziwa ubuchwepheshe obukhethekile futhi abufaki ukolweni omningi njenge-rye ne-peeled, ezinye izinto zifakwa kuso.
Kodwa-ke, kufanele uthenge umkhiqizo onjalo ezitolo ezikhethekile noma uzilungiselele wona, ngoba amabhikawozi ezindawo ezinkulu zokuthenga akunakwenzeka ukuthi athobele ubuchwepheshe futhi enze isinkwa ngokuya ngamazinga anconyiwe.
Isinkwa esimhlophe kufanele singafakwa ekudleni, kepha ngasikhathi sinye, abanesifo sikashukela abaningi banezifo ezihlobene nesiqubulo sokugaya, lapho ukusetshenziswa kwama-rye rolls kungenakwenzeka khona. Kulokhu, kuyadingeka ukufaka isinkwa esimhlophe kumenyu, kepha ukusetshenziswa kwayo okuphelele kufanele kukhawulelwe.
Izinhlobo ezilandelayo zemikhiqizo kafulawa zilungele iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 noma uhlobo 2.
Zingamapuleti afana nabaphangi. Ngokuvamile zenziwa ngemikhiqizo yokusanhlamvu enokuqukethwe okuphezulu kwefiber, aqukethe inani elikhulu lama-carbohydrate ahamba kancane, izakhi zefayibhu nezokulandela. Ngokungeza imvubelo ewusizo ohlelweni lokugaya ukudla. Ngokuvamile, anezinga eliphansi le-glycemic, futhi angaba nokuthambekela okuhlukile ngenxa yokungezelwa okusanhlamvu okuhlukahlukene.
Ukubhalwa kwesinkwa yile:
kusuka kungxube yamabele.
Izinto ezibhakiwe ezenziwe ngofulawa we-rye
Ufulawa we-Rye unokuqukethwe okuphansi kwama-carbohydrate agaya ukudla kalula, ngakho-ke angasetshenziswa ekunakekelweni kwesifo sikashukela.
Noma kunjalo, inokunamathela okumpofu futhi imikhiqizo evela kuyo ayikhuli kahle.
Ngaphezu kwalokho, kunzima ukugaya. Ngakho-ke, kuvame ukusetshenziswa emikhiqizweni exubekile, equkethe amaphesenti athile kafulawa we-rye nezinye izithasiselo ezehlukene.
Okuthandwa kakhulu yisinkwa se-Borodino, esizosiza ngenani elikhulu lezinto ezibalulekile zokulandela umkhondo kanye ne-fiber, kepha kungaba yingozi kubantu abanezifo zomgudu we-gastrointestinal. Kufika kuma-325 amagremu wesinkwa seBorodino avunyelwe ngosuku.
Yenzelwe ngqo abantu abanesifo sikashukela. Umkhiqizi usebenzisa ufulawa osetshenzisiwe nezinye izithasiselo ezahlukahlukene ezandisa okuqukethwe kweprotheni yemifino futhi kunciphisa namaphesenti ama-carbohydrate. Umkhiqizo onjalo unemiphumela emincane ekubandakanyekeni koshukela egazini futhi lungasetshenziswa nsuku zonke.
Ngaphezu kwalokho, izinhlobo ezinjalo zesinkwa ezinjenge-oatmeal noma i-protein-bran, ukolweni-bran, i-buckwheat nezinye zingathengiswa ezitolo. Banesilinganiso esinciphile sama-carbohydrate alula, ngakho-ke kungcono ukukhetha lezi zinhlobo, ikakhulukazi lezo ezingenakudla isinkwa se-rye.
Ungenza umkhiqizo osebenzayo owusizo ekhaya, ongawadingi amakhono akhethekile, vele ulandele iresiphi.
Uhlobo lwakudala lubandakanya:
noma yimuphi ufulawa wokusanhlamvu: rye, i-oatmeal, i-buckwheat,
Inhlama ifakwa njengemvubelo ejwayelekile bese ishiyelwa amahora ambalwa ukuvutshelwa. Ngemuva kwalokho, kwakhiwa ama-buns kusuka kulo futhi abhakwe kuhhavini ngamadigri ayi-180 noma emshinini wesinkwa ngemodi ejwayelekile.
Uma ufisa, uvule ama-fantasy bese ungeza izakhi ezahlukahlukene enhlama yokuthuthukisa ukunambitheka:
Iresiphi yevidiyo yokubhaka i-rye:
Ukuze ulungiselele umqulu we-protein-bran, udinga ukuthatha:
Amagremu ayi-150 kashizi wekhokho omncane,
isipuni sikafulawa wokubhaka
2 wezipuni zikakolweni we-kakolweni,
4 wezipuni ze-oat bran.
Zonke izakhi kufanele zihlanganiswa, zifakwe efomini elinamafutha bese zisethelwa kuhhavini osuke usushisa cishe isigamu sehora. Ngemuva kokulungela ukukhipha kuhhavini bese umboza ngesigaxa.
Ngemikhiqizo ye-oat uzodinga:
1.5 izinkomishi zobisi olufudumele,
Amagremu ayi-100 e-oatmeal
2 wezipuni zanoma yiliphi i-oyela yemifino,
Amagremu angama-50 kafulawa we-rye
Amagremu angama-350 kafulawa kakolweni webanga lesibili.
Ama-flakes afakwe ubisi imizuzu eyi-15 ukuya kweyi-20, amaqanda nebhotela kuxutshwe nawo, khona-ke kuhlanganiswa inhlanganisela kakolweni nefulawa ye-rye, inhlama ifakwe. Konke kudluliselwa kwifomu, enkabeni ye-bun kwenziwa indawo yokuqothula, lapho udinga ukubeka khona imvubelo eyomile encane. Ngemuva kwalokho ifomu lifakwa emshinini wesinkwa bese libhakwa amahora angama-3.5.
Ukwenza i-bun-buckwheat bun, udinga ukuthatha:
Amagremu ayi-100 kafulawa ocwebezelayo, ungawupheka ngokwawo ngokubhekisisa engxenyeni yekhofi ejwayelekile,
450 amagremu kafulawa kakolweni webanga lesibili,
0.5 izinkomishi ze-kefir,
2 wezipuni zemvubelo eyomile,
2 wezipuni kawoyela yemifino.
Okokuqala, ufulawa wenziwa ngofulawa, imvubelo nobisi, kufanele kushiywe imizuzu engama-30-60 ukuze ukhuphuke. Ngemuva kwalokho engeza izingxenye ezisele bese uhlanganisa kahle. Ngemuva kwalokho shiya inhlama ukuba ikhuphuke, lokhu kungenziwa ngaphakathi endlini noma ukufaka isikhunta emshinini wesinkwa onombuso othile wokushisa. Ngemuva kwalokho ubhake imizuzu engaba ngu-40.
Imikhiqizo yeflour, okumele ingafakwa ngokuphelele ekudleni kweziguli ezinesifo sikashukela, i-khekhe nazo zonke izinhlobo ze-confectionery kafulawa. Lokhu kuchazwa iqiniso lokuthi ukubhaka kubhakwe kusuka kufulawa we-premium futhi kuqukethe inani elikhulu kakhulu lama-carbohydrate angagaywa kalula. Ngokuvumelana nalokho, inkomba yakhe ye-glycemic iphezulu kakhulu, futhi lapho kudliwa i-bun eyodwa, umuntu uthola isilinganiso soshukela cishe njalo ngeviki.
Ngaphezu kwalokho, ukubhaka kuqukethe ezinye izinto eziningi ezithinta kabi isimo sikashukela:
flavour kanye izithasiselo
izihlungi ezimnandi nezinto.
Lezi zinto azigcini nje ngokwanda ushukela wegazi, kodwa futhi nokwanda kwe-cholesterol, okuholela engcupheni yokuba nezifo zenhliziyo, kushintsha ukwakheka kwegazi futhi kungadala ukungezwani komzimba.
Ukusetshenziswa kwezithasiselo zokwenziwa kuholela ekonyuselweni komthwalo esibindini namanyikwe, asivele ehlupheka kwabanesifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, baphazamisa uhlelo lokugaya ukudla, lubangele ukushaya kwenhliziyo, lubambe futhi lube nokuqhakaza, ngokuvamile lubangela ukungahambi kahle.
Esikhundleni samakhekhe amnandi, ungasebenzisa amakhekhe akho amahle:
imigoqo yokusanhlamvu ephelele.
Kodwa-ke, lapho ukhetha i-dessert, kufaka phakathi izithelo, abanesifo sikashukela kufanele bahlaziye kuqala okuqukethwe ushukela kubo, futhi bakhethe labo lapho buncane khona.
Ukudla isinkwa sabantu abanesifo sikashukela kuyinto ejwayelekile. Ngemuva kwakho konke, lo mkhiqizo ucebile kakhulu ezintweni ezilusizo. Kepha akuzona zonke izinhlobo zezinkwa ezingadla abanesifo sikashukela, kudingeka bakhethe izinhlobo lapho okuqukethwe kwama-carbohydrate angagayishwa khona kube kuncane, futhi amaprotheni emifino kanye nemicu aphelele. Isinkwa esinjalo sizokulethela inzuzo kuphela futhi sizokuvumela ukuba ujabulele ukunambitheka okumnandi ngaphandle kwemiphumela.
Abanye, sebefundile ngokugula kwabo, ngokushesha bayeka ukudla isinkwa, kanti abanye, ngokungafani nalokhu, bayaqhubeka nokudla ngendlela elinganayo njengangaphambili.
Kuzona zombili lezi zigameko, indlela yokuziphatha kweziguli kubhekwa njengengalungile. Odokotela bafuna ukunqunyelwa kwalo mkhiqizo, hhayi ukukhishwa ngokuphelele. Into esemqoka ukwazi ukuthi hlobo luni lwesinkwa ongasidla nesifo sikashukela.
Ngoba ukwakheka kwesinkwa kufaka izinto ezidingekayo ekusebenzeni okugcwele komzimba:
Ukulandela izinto: i-sodium, i-iron, i-phosphorus, i-magnesium,
Ama-amino acid amaningi.
Okudingwa iziguli ukwazi ukuthi kubalwa kanjani isilinganiso sosuku nsuku zonke kahle.
Iyunithi elilodwa lesinkwa libhekwa njengesinkwa esinesisindo esingu-25 amagremu - lokhu kulingana namagremu ayi-12 kashukela noma amagremu ayi-15 ama-carbohydrate.
Inkinga enkulu yamayunithi esinkwa iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1. Njengoba wonke ama-carbohydrate adliwayo kufanele aqedwe ukulungiswa kwe-insulin, ikakhulukazi ezimweni lapho ukuphathwa kwayo kudingeka ngaphambi kokudla.
Iyunithi eli-1 lesinkwa liyisiqebelengwane sesinkwa esisikwe ekuqineni okungamasentimitha ayi-1, noma ngabe asha noma omisiwe.
Imuphi umkhiqizo engingawusebenzisa?
Ngokungafani nabantu abaphilile, akuzona zonke izinhlobo zezinkwa ezingadliwa uhlobo lwesifo sikashukela esingu-1-2.
Abantu abanalesi sifo badinga ukukhipha ngokuphelele imikhiqizo yesinkwa equkethe ama-carbohydrate asheshayo ekudleni:
Imikhiqizo evela kufulawa we-premium,
Isinkwa se-Rye sivunyelwe isifo sikashukela sohlobo 2, 1. Noma ufulawa kakolweni ukhona kuwo, akuyona indlela ephezulu yokuhlanza (kaningi ibanga 1 noma 2).
Uhlobo lwesinkwa lungagcwele isikhathi eside, ngoba luqukethe i-fiber yokudla nama-carbohydrate ahamba kancane.
Okuncane ngesinkwa esinsundu
Isinkwa esinsundu kumele sibe khona ekudleni kwawo wonke umuntu. Njengoba iqukethe i-fiber, iyadingeka ekusebenzeni kahle kwepheshana lesisu.
Amayunithi ama-2 esinkwa ahambelana:
5 amagremu amaprotheni
Amagremu ama-33 ama-carbohydrate,
Amagremu angama-27 wamafutha.
Ukubuka Okujwayelekile - Okumhlophe
Ukuba khona kwesinkwa esimhlophe ekudleni kwesifo sikashukela kungenzeka, kodwa kuphela ngemvume kadokotela nangamanani aqokelwe ngokuqinile.
Mayelana nokufakwa kwefulawa ibe ebangeni eliphakeme kakhulu, inani elikhulu lamavithamini liyalahleka ekwakhekeni kwalo, futhi lapho kupheka isinkwa uqobo, ngenxa yethonya lokushisa okuphezulu ngesikhathi sokubhaka kwalo, amavithamini asele angabonakala ngomonakalo. Kunokusizakala okuncane kwesinkwa esinjalo.
Ukwanda kwe-acid yesinkwa esinsundu kungalimaza umzimba womguli.
Isifo sikashukela nesinkwa
Isinkwa sikashukela sivele emashalofini wesitolo, ziyakwazi ukwanelisa umzimba wesiguli ngamavithamini, amaminerali nezinto ezilandelwayo ngaphandle kokulimaza uhlelo lokugaya ukudla, ngoba inqubo yokuzilungiselela ayinamvubelo.
Okuthandwayo kuthambekele ekubukekeni komkhiqizo, kepha ukolweni awwenqatshelwe ngokuphelele.
Emadolobheni amakhulu, i-assortment yesinkwa inkulu kakhulu, ngisho nakwezinye izitolo ezinkulu kuneminyango yokudla. Kodwa ungapheka isinkwa sokudla ngokwakho ngokulandela izincomo ezithile. Odokotela bavunyelwe ukunikezwa imiyalo eminingana.
Inketho 1 "i-rye eyenzelwe ekhaya"
Ukulungiselela lolu hlobo lwesinkwa oludingayo imikhiqizo:
Ufulawa wamasondo onesisindo esingu-250 amagremu,
650 amagremu kafulawa we-rye
Ushukela enanini lezipuni ezi-1,
Faka usawoti wethebula osayizi wezipuni eziyi-1.5,
Imvubelo yotshwala enani lama-gramu ayi-40,
Amanzi afudumele (njengobisi olusha) 1 / litre,
Amafutha emifino enanini le-1 ithisipuni.
Izikhunta zibekwa endaweni efudumele ukuze isinkwa sikhuphuke futhi bese sibekwa kuhhavini ozosibhaka. Ngemuva kwemizuzu engu-15 yokupheka, uqweqwe lwayo oluphumela lapho kufanele luthiswe ngamanzi lubuyiselwe kuhhavini.
Isikhathi sokupheka silinganisa kusuka kumaminithi angama-40 kuye kwangama-90.
Inketho 2 "I-Buckwheat ne Wheat"
Le ndlela yokupheka icabanga ukupheka emshinini wesinkwa.
Ukwakheka kwezithako kungokulandelayo:
Ufulawa we-Buckwheat obiza amagremu ayi-100,
Ama-kefir angenamafutha anomthamo wamamililitha ayikhulu,
Ufulawa kakolweni we-premium onesisindo esingu-450 amagremu,
Amamilimitha angama-300 afudumele amanzi afudumele,
Isipuni esisheshayo se-2,
Amafutha omnqumo noma omnqumo 2 amatafula. nezinkezo
Isipuni seshukela esingu-1,
Usawoti 1.5 wezipuni.
Ukulungiswa kwenhlama nendlela yokubhaka kuyefana nasendleleni yokuqala.
Noma yisiphi isinkwa isiguli sikashukela esisilungisile, kubalulekile njalo ukukhumbula umthetho owodwa - lokhu inzuzo ephezulu yomzimba.
Imikhiqizo kafulawa evunyelwe yeshukela
Isinkwa singenye yezinto eziphambili, okunzima ukwenqaba ezinye, ikakhulukazi lezo ezinesifo sikashukela. Ukwenza lula ukwenqatshwa kwesinkwa esingenampilo, ezinye izinhlobo zalo mkhiqizo zingangeniswa ekudleni kweziguli.
Ngaphezu kokusanhlamvu okuphelele, i-rye emnyama, isinkwa se-bran nesifo sikashukela, ezinye izinto ezibhakiwe noma imikhiqizo yenhlama kuvunyelwe ekudleni kwabanesifo sikashukela.
Le mikhiqizo ifaka amabhisikidi, ama-crackers kanye nama-roll rolls. Uhlu lwamakheli oluvunyelwe lufaka noma yiliphi ikhekhe elingabhaki. By way, baking inedible uhlobo lwemikhiqizo yokubhaka engaqukethe amaqanda, ubisi kanye nama-additives ama-fat, imajarini noma amanye ama-oyela.
Bonke abantu abanesifo sikashukela kufanele bazi ukuthi ekubhaka noma ekudleni imikhiqizo kafulawa, kubalulekile ukuthi ungafaki konke lokho okwenziwe ngofulawa weprimiyamu noma ufulawa onenkomba ye-glycemic ephezulu.
Uma kungenakwenziwa imikhiqizo efanelekile evela ngofulawa omncane owakhiwe lapho uthengiswa mahhala, khona-ke, uma ufisa, ungalungisa ama-khekhe anambitha futhi anempilo ekhaya. Ukwazi iresiphi efanele yokupheka ama-dessert ahlukahlukene kanye namakhekhe amnandi usebenzisa izithako ezivunyelwe kuphela, zonke iziguli zasekhaya ezinesifo sikashukela zingaba namaswidi amnandi eyenziwe ekhaya.
Lapho ulungiselela inhlama yama-dessert nezinye izinto zokupheka, sebenzisa ufulawa we-wholemeal kuphela. Esikhundleni sikashukela, faka i-sweetener. Amaqanda awavunyelwe ukufakwa kwinhlama. Ibhotela noma imajarini nayo ayivinjelwe, lapho kukhona imajarini enokwakheka kophansi kwamafutha, ayinqatshelwe ukuyisebenzisa.
Sinikeza iresiphi yokuhlola eyisisekelo ongapheka kuyo ubhake amapayi amaningi ahlukahlukene, ama-rolls noma ama-muffin.
Ukuhlolwa okunjalo uzodinga:
Imvubelo - cishe amagremu angama-30,
Amanzi afudumele - 400 ml,
I-rye kafulawa - uhhafu wekhilogremu,
2 Ithebula. Amafutha emifino.
Ukuze upheke, hlanganisa yonke imikhiqizo bese ufaka enye ingxenye yekhilogamu kafulawa we-rye. Ngemuva kwalokho inhlama kufanele ivele endaweni efudumele isikhashana. Lapho inhlama isifanele, ungapheka noma yiliphi i-pastries kuyo.
Izici Zokudla Kwesifo Sikashukela
Ukudla okunempilo yisikhathi esidingekayo futhi esibalulekile empilweni yanoma yimuphi umuntu. Ezigulini ezinesifo sikashukela, indima yokondleka kufanele ibe sendaweni yesibili ngemuva kwezidakamizwa.
Konke ukudla kwesiguli kufanele kulawulwe ngokuphelele ngudokotela ohambelayo. Ngokusetshenziselwa izinkomba ngazinye, udokotela weluleka isiguli ngokudla konke isikhathi sesifo.
Ukudla okuyisisekelo okugcwele kwesiguli kufanele kugcwaliswe ngoshukela nokudla okuqukethe ushukela kancane ngangokunokwenzeka - lokhu kungumthetho owodwa ojwayelekile futhi owodwa owenzelwe zonke iziguli ezinesifo sikashukela mellitus.
Noma kunjalo, zonke iziguli kufanele zikhumbule umthetho owodwa obalulekile - ukungafakwa “kwama-carbohydrate akhanyayo” ekudleni kwazo. “Ama-carbohydrate akhanyayo” kusho konke ukudla okuqukethe ushukela omningi. Lokhu kufaka phakathi: amakhekhe, ama-rolls, wonke ama-pastry, izithelo ezimnandi (ubhanana, amagilebhisi), wonke amaswidi namaswidi, ujamu, ujamu, ujamu, ushokoledi, okusanhlamvu, isinkwa esimhlophe.
Iziguli ezinesifo sikashukela kufanele ziqonde ukuthi izondlamzimba kufanele zilinganiselwe futhi zihlukaniswe izingxenye ezimbalwa ezincane. Lo mthetho uzokuvumela ukuthi uguqule ibhalansi emzimbeni ngaphandle kokudala izinkinga ngokugxuma kumazinga kashukela wegazi.
Umgomo wonke wokudla kwabanesifo sikashukela wenzelwe ukubuyisa zonke izinqubo ze-metabolic emzimbeni. Isiguli sidinga ukuqapha lokho esikudlayo, ukuze singabangeli ukugcwala kweglucose egazini.
Kubo bonke abanesifo sikashukela, udinga ukulandela amakhalori adliwayo. Lokhu kuzokuvumela ukuthi ulawule konke ukudla.
Izinkinga ezingaba khona zesifo, ngokwenqaba kokudla
Zonke iziguli ezingaphansi kokuqashwa njalo kwezokwelapha zingaba sengozini uma zenqaba ukudla okunqunyiwe noma uma kuchazwa ngokungafanele futhi kwenziwa.
Phakathi kwezinkinga eziyingozi kakhulu kwabanesifo sikashukela kufaka phakathi iqembu elibizwa ngokuthi yi-acute group, ukungena kulo kwesinye isikhathi isiguli kuba nzima ukusindisa. Eqenjini elinamandla, umzimba wonke uvame ukuhlupheka, umgomo wokusebenza ongaqondakali ukubikezela.
Enye yale miphumela emibi yisimo se-ketoacidosis. Ngenqubo yokubonakala kwakhe, isiguli singazizwa sibi. Lesi simo sivamile ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1. Lesi simo singandulelwa wukuhlukumezeka, ukungondleki noma ukungenelela kokuhlinzwa.
I-Hyperosmolar coma ingenzeka nge-glucose ephezulu yegazi. Lesi simo saziwa ngabantu abadala. Ngenxa yalokhu, isiguli kwesinye isikhathi siyachama futhi sihlala somile.
Ngokungondleki kahle njalo, kuvela imiphumela engapheli noma engapheli yesifo sikashukela. Lokhu kufaka phakathi isimo esingesihle sesikhumba seziguli, ukuqala kwezinkinga ngezinso nenhliziyo, kanye nokusebenza okungahambi kahle kohlelo lwezinzwa.
Amakhambi esintu ukusiza
Njengezifo, isifo sikashukela sinezindlela eziningi zemithi ezosiza ekutholeni ibhalansi yemvelo emzimbeni futhi ihambise okuqukethwe kweglucose.
Imithi eminingi yendabuko yenziwa kulokho imvelo kamama eyakubeletha ngomhlaba wakhe wokuzalwa. Izithako eziyinhloko zokupheka okunjalo kuzoba amakhambi nezitshalo.
Ukwehlisa ushukela wegazi, ungasebenzisa iresiphi, efaka kuphela iqabunga le-bay namanzi abilayo. Ukuze ulungiselele, uthele izingcezu eziyisithupha zeqabunga le-bay emanzini abilayo (inkomishi eyodwa nesigamu). Kuyeke kube usuku. Phuza amagremu angama-50 ngaphambi kokudla. Inkambo yokwamukelwa isukela ezinsukwini eziyi-15 kuye kwezingu-21.
ILinden izokwazi ukunikeza umphumela ofanele wokupholisa. Ukuze wenze lokhu, thatha itafula le-2. wezipuni zezimbali uwagcwalise ngengilazi ezimbili zamanzi abilayo. Ngemuva kokuxineka nokumnika okungamahora, umhluzi ungadakwa njengetiye.
Umuthi onikezwa ngamaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka ungathathwa uhlanganiswe nemithi.
Ukulungiselela ukumnika okudingayo:
4 wezipuni amaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka,
1 - peppermint,
2 - i-sihlahla sivame ukutholakala,
2 - Imbewu yefilakisi
I-3 - Amakhambi e-wort yaseSt
I-3 - amakhambi ajwayelekile,
I-Immortelle sand - izipuni eziyi-7,
I-sttleing nettle - izipuni ezi-5.
Hlutha wonke amakhambi, uthathe izipuni ezi-4 zezithako ezomile ezithole. Thela nabo ilitha lamanzi abilayo. Akuyeke kube ngamahora ayi-12. Thatha nengilazi yengilazi nengxenye, isigamu sehora ngaphambi kokudla.
Akuyona yonke imingcele edinga ukwephulwa. Ukubhaka kungaba nempilo futhi kumnandi, udinga ukwazi ukuthi yini okufanele uyidle. Ngosizo lwamakhambi abantu, ungagcina amazinga kashukela egazini.
Kungani isinkwa siphikiswa kushukela?
Izinkwa nemisiko yanamuhla, empeleni akusona isibonelo sokudla okunempilo koshukela:
Ziphezulu kakhulu amakhalori: ku-100 g 200-260 kcal, kucezu olu-1 olujwayelekile - okungenani i-100 kcal. Ngokwesifo sikashukela sohlobo 2, iziguli sezivele zinesisindo eseqile. Uma udla isinkwa njalo futhi okuningi, isimo sizoba sibi kakhulu. Kanye nokukhuluphala kwesisindo, umuntu onesifo sikashukela udla imbuyiselo yesifo sikashukela, ngoba ukuntuleka kwe-insulin nokumelana ne-insulin kuyakhula.
Imikhiqizo yethu ejwayelekile yokubhaka ine-GI ephezulu - ukusuka ema-65 kuye kuma-90 amayunithi. Ezimweni eziningi, isinkwa sikashukela sibangela ukugxuma okukhulu kwe-glycemia. Isinkwa esimhlophe singakwazi ukukhokhela abanesifo sikashukela sohlobo lwe-2 kuphela abanefomu lesifo noma ababambe iqhaza kwezemidlalo, futhi ngisho nangesikhathi esincane.
Ekhiqizweni kwezinkwa nokolweni, okusanhlamvu okusetshenziswe kahle kusuka kumagobolondo kuyasetshenziswa. Kanye namagobolondo, okusanhlamvu kulahlekelwa amavithamini amaningi, i-fiber kanye namaminerali, kodwa kugcina wonke ama-carbohydrate.
Ngesikhathi lapho isinkwa sasiyisisekelo sokondleka, senziwa ngezinto zokuhlanza ezingafani ngokuphelele. Ukolweni wawunamandla, ungahlanzwa kahle ezindlebeni zommbila, okusanhlamvu kwakumiswa kanye nawo wonke amagobolondo. Isinkwa esinjalo besinganambitheki kangako kunesinkwa sanamuhla. Kepha yayinakwa kancane, ibe ne-GI ephansi futhi iphephile isifo sikashukela sohlobo 2. Manje isinkwa sinoxhaxha futhi siyabukeka, kukhona ubuncane bokudla komoya kuyo, ukutholakala kwama-saccharides kuyakhuphuka, ngakho-ke, ngokuya ngomphumela we-glycemia kushukela, awahlukile kakhulu kwi-confectionery.
Izinzuzo zesinkwa sabashukela
Lapho unquma ukuthi kungenzeka yini ukudla isinkwa esinohlobo 2 lwesifo sikashukela, umuntu ngeke asho ngezinzuzo ezibalulekile zayo yonke imikhiqizo yokusanhlamvu. Ezinkomeni, okuqukethwe kwamavithamini we-B kuphakeme, i-100 g ingaqukatha kuze kufike kwisithathu sezidingo zansuku zonke zesifo sikashukela ku-B1 naku-B9, kuze kufike ku-20% wesidingo seB2 neB3. Bacebile ngezinto ezincane nezinkulu, bane-phosphorus eningi, i-manganese, i-selenium, ithusi, i-magnesium. Ukudla okwanele kwalezi zinto kwisifo sikashukela kubalulekile:
I-B1 iyingxenye yama-enzyme amaningi, akunakwenzeka ukwenza ngokwejwayelekile i-metabolism yesifo sikashukela esinokushoda,
ngokubamba iqhaza kwe-B9, izinqubo zokuphulukisa nokuvuselela izicubu ziyaqhubeka. Ingozi yezifo zenhliziyo nezemithambo, evame ngesifo sikashukela, iba ngaphezulu kakhulu ezimweni zokuntuleka kwale vithamini isikhathi eside,
I-B3 ibandakanyeka ezinqubweni zokukhiqizwa kwamandla ngumzimba, ngaphandle kwayo impilo esebenzayo ayinakwenzeka. Ngohlobo 2 lwesifo sikashukela olubolile, ukusetshenziswa okwanele kwe-B3 kuyimfuneko yokuvimbela unyawo lwesifo sikashukela ne-neuropathy,
I-Magnesium ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus iyadingeka ukuze kulondolozwe ibhalansi ye-calcium, i-sodium ne-potassium emzimbeni, umfutho wegazi ophakeme ungabangelwa ukushoda kwayo.
I-Manganese - ingxenye yama-enzyme ebhekene nokudla kwama-carbohydrate namafutha, iyadingeka ekuhlanganiseni okuvamile kwe-cholesterol kushukela,
selenium - i-immunomodulator, ilungu lohlelo lokulawulwa kwehomoni.
I-Endocrinologists yeluleka abanesifo sikashukela lapho bekhetha ukuthi yisiphi isinkwa esingadliwa, ukuhlaziya ukwakheka kwabo kwe-Vitamin kanye ne-mineral. Nakhu okuqukethwe ngumsoco ezinhlotsheni ezithandwa kakhulu zesinkwa ku-% yezidingo zansuku zonke:
Ukwakheka Uhlobo lwesinkwa
Okumhlophe, ufulawa kakolweni weprimiyamu Amagatsha, ufulawa kakolweni I-Wallpaper kafulawa kafulawa Ukuhlanganiswa okusanhlamvu okusanhlamvu okuphelele
Potassium 4 9 10 9
I-calcium 2 7 4 10
Magnesium 4 20 12 20
Isodiyamu 38 37 47 29
Iphosphorus 8 23 20 29
Manganese 23 83 80 101
Copper 8 22 22 28
ISelenium 11 56 9 60
Isiguli sesifo sikashukela kufanele sikhethe uhlobo luni lwesinkwa?
Lapho ukhetha ukuthi yisiphi isinkwa okufanele usithengele isiguli sikashukela, udinga ukunaka isisekelo sanoma yimuphi umkhiqizo wabhaka - ufulawa:
Ufulawa kakolweni we-Premium ne-1st kuyingozi nje kushukela ushukela ocoliweyo. Zonke izinto eziwusizo kakhulu lapho igaya ukolweni iba imfucuza yezimboni, futhi ama-carbohydrate aqinile ahlala kufulawa.
Isinkwa esinqunyiwe sizuzisa kakhulu kushukela. Inamavithamini amaningi, futhi isilinganiso saso sokufaka sincane kakhulu. Amagatsha aqukethe kuze kufike ku-50% wefayibha yokudla, ngakho-ke kukhona i-GI encane yesinkwa se-bran.
Isinkwa se-Borodino sikashukela sibhekwa njengenye yezinketho ezamukelekayo. Ilungiselelwe kusuka kuxutshwe kakolweni nofulawa we-rye futhi inesakhiwo esicebile kunesinkwa esimhlophe.
Isinkwa se-rye ngokuphelele sikashukela siyindlela enhle, ikakhulukazi uma kufakwa i-fiber eyengeziwe kuyo. Kungcono uma umqulu wenziwe ngephepha lodonga, ezimweni ezimbi kakhulu, ufulawa we-peeled. Kufulawa enjalo, i-fiber yemvelo yokudla okusanhlamvu iyagcinwa.
Isinkwa esingenayo i-gluten siyindlela ethatha amazwe namazwekazi. Abalandeli bezimo zokuvota ezinempilo baqala ukwesaba i-gluten - gluten, etholakala kukolweni, i-oatmeal, i-rye, ufulawa webhali, futhi yaqala ukushintshana kakhulu nelayisi nommbila. Umuthi wanamuhla uphikisana nokudla okungenama-gluten kohlobo 2 sikashukela esivame ukubekezelela i-gluten. Isinkwa sombila ngokufakwa kwerayisi nefulawa ye-buckwheat kune-GI ephezulu kakhulu = 90, ngesifo sikashukela sikhulisa i-glycemia ngisho nangoshukela ocwengekile.
Isinkwa esingelamvubelo esithandwa kamuva nje asisiyona into nje esiyindlela yokukhangisa. Isinkwa esinjalo sisaqukethe imvubelo yemvubelo, ngaphandle kwalokho isinkwa bekungaba yinhlama eqinile, engasebenzi. Futhi imvubelo kunoma yisiphi isinkwa esiqediwe iphephile ngokuphelele. Bafa emazingeni okushisa angaba ngu-60 ° C, kuthi ngaphakathi umqulu ngenkathi ubhaka ukushisa okungaba ngu-100 ° C kudalwe.
Ngiphuthuma ukutshela izindaba ezinhle - i-Endocrinological Research Center yaseRussia Academy yezeSayensi Yezokwelapha ikwazile ukuthuthukisa umuthi owelapha ngokuphelele isifo sikashukela i-mellitus. Okwamanje, ukusebenza kwalesi sidakamizwa kusondela ku-98%.
Kunzima kakhulu ukuthola isinkwa esilungele ukuthengiswa kwabashukela abanokuqukethwe okuphezulu kofulawa we-rye, izinga eliphakeme le-fiber yokudla, ngaphandle kokuthuthuka nesitashi esilungisiwe. Isizathu ukuthi isinkwa esinjalo empeleni asithandwa: akunakwenzeka ukubhaka njengosisi, muhle futhi simnandi njengebhasikidi elimhlophe. Isinkwa esiwusizo sikashukela sinenyama emnyama, eyomile, esindayo, udinga ukwenza imizamo yokuyihlafuna.
Ungasidla isinkwa esingakanani nesifo sikashukela
Ukulayisha i-carbohydrate kunqunywa ngokuhlukile kwisifo sikashukela ngasinye. Uhlobo olude lwesifo sikashukela esikhona, isiguli esingaphansi singakwazi ukukhokhela ama-carbohydrate ngosuku, kanti i-GI ephansi kufanele ibe nokudla okuqukethe i-carbohydrate. Ukuthi abanesifo sikashukela bangaba nesinkwa yini noma cha, udokotela oholayo uyanquma. Uma lesi sifo sinxephezelwa, isiguli sesilahlekile futhi sigcina ngempumelelo isisindo esijwayelekile, singadla sifinyelela kuma-300 g wama-carbohydrate angahlanzekile ngosuku. Lokhu kufaka okusanhlamvu, nemifino, nesinkwa, nakho konke okunye ukudla okunama-carbohydrate. Noma kunjalo esimeni esihle kakhulu, kuvunyelwe kuphela isigaxa sikakolweni nesinkwa esimnyama seshukela, bese kubekwa imikhondo emhlophe kanye nezinkwa. Esidlweni ngasinye, ungadla ucezwana owodwa wesinkwa, inqobo nje uma kungekho amanye ama-carbohydrate epuletini.
Ungasishintsha kanjani isinkwa ngohlobo 2 sikashukela:
Imifino enoswidi kanye nesobho elibunjiwe kuxutshaniswa nezinkwa eziphelele zokusanhlamvu ngokufakwa kwe-bran. Zinokuqanjwa okufana nesinkwa, kepha kudliwa ngamanani amancane.
Imikhiqizo evame ukubekwa esinkomeni ingafotshwa ngeqabunga le-lettu. UHamu, inyama ebhakwe, ushizi, ushizi wekhotishi osawoti ku-isaladi awusemnandi kangako ngendlela yesangweji.
Uma kwenzeka isifo sikashukela i-mellitus, esikhundleni sesinkwa, engeza i-zucchini noma iklabishi eligayiwe ku-blender esikhundleni senyama eyosiwe; ama-cutlets azoba nje namanzi futhi athambile.
Isinkwa Soshukela Soshukela
Eduze kwesinkwa esifanele ishukela, ungazibhaka ngokwakho. Ngokungafani nesinkwa esivamile, sinamaprotheni amaningi ne-fiber yokudla, ubuncane bama-carbohydrate. Ukucacisa, lesi akusona isinkwa nhlobo, kodwa ikhekhe elinosawoti, likashukela lingakwazi ukumiselela ngempumelelo isinkwa esimhlophe nesitini saseBorodino.
Ukulungiselela i-cottage shizi i-low-carb rolls, hlanganisa i-250 g ye-cottage shizi (okuqukethwe okunamafutha ngo-1.8-3%), 1 tsp. i-baking powder, amaqanda ama-3, izipuni ezi-6 ezigcwele zikakolweni kanye ne-oat hhayi i-granured bran, isipuni esisodwa sikasawoti esiphelele. Inhlama izoba yi-sparse, awudingi ukuyigoqa. Beka indishi yokubhaka nge-foil, faka inqwaba ephumela kuyo, ukala isipuni phezulu. Bhaka imizuzu engama-40 ku-200 ° C, bese ushiya kuhhavini enye ingxenye yehora. Ama-carbohydrate ku-100 g yesinkwa esinjalo sabanesifo sikashukela - cishe 14 g, i-fiber - 10 g.
Qiniseka ukuthi ufunda! Ngabe ucabanga ukuthi ukuphatha impilo yonke amaphilisi ne-insulin ukuphela kwendlela yokugcina ushukela ulawulwa? Hhayi iqiniso! Ungakuqinisekisa lokhu ngokwakho ngokuqala ukuyisebenzisa. funda kabanzi >>